Ny pneomatôlôjia dia taranja teôlôjika ao amin' ny fivavahana kristiana izay iresahana sy ianarana ary ampianarana ny amin'ny Fanahy Masina.
2.1 Ny Fanahy Masina
2.2 Ny fanilovan' ny Fanahy Masina
2.3 Ny fidinan' ny Fanahy Masina
2.4 Ny fahateraham-baovao
2.5 Ny fanomezan' ny Fanahy Masina
2.6 Ny batisan' ny Fanahy Masina
Ny teny hoe pneomatolojia dia avy amin'ny teny grika hoe πνεῦμα / pneuma "fanahy" sy λόγος / logos "fampianarana" na "fianarana".
Iresahana ny amin'ny personan'ny Fanahy Masina ao amin'ny Trinite sy ny asan'ny Fanahy Masina ny pneomatolojia. Taty aoriana dia tafiditra ao amin'io taranja io koa ny hoe fahateraham-baovao, ny fanomezan'ny Fanahy (karismata), ny batisan'ny Fanahy, ny fanamasinana, ny tsindrimandrin'ny mpaminany, ary ny filatsahan'ny Fanahy Masina. Ny antokom-pinoana kristiana samihafa dia samy manana ny fomba anaovany pneomatôlôjia.
Ankehitriny dia misy ny fiangonana izay manaiky fa Andriamanitra mahaleo tena fa tsy persônan' Andriamanitra tokana ny Fanahy Masina, tsy iza izany fa ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin'ny Andro Farany. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia Andriamanitra telo samy manana ny persônany sy ny natiorany avy nefa mifameno.
Ny fanomezan'ny Fanahy dia fanomezana hery mahagaga avy amin' ny Fanahy Masina. Izany dia fahasoavana avy amin' Andriamanitra izay ilain' ny Kristiana tsirairay sady nilain' ireo Apostoly koa tamin' ny andron' izy ireo mba hahafahana manatanteraka ny iraka ampanaovina ny Fiangonana. Ireo fanomezana ireo dia avy amin'ny Fanahy Masina ka atolony ny isam-batan'olona, nefa ny tanjony dia ny hampahatanjaka ny Fiangonana manontolo. Resahina ao amin' ny Testamenta Vaovao ireo fanomezana ireo, ka hita izany ao amin'ny Epistily voalohany ho an'ny Korintiana (1Kor. 12. 8-10; 12.28), ao amin'ny Epistily ho an'ny Romana (Rom. 12. 6-8) ary ao amin'ny Epistily ho an'ny Efesiana (Efes. 4. 11). Miresaka momba ny fanomezan' ny Fanahy koa ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera (1Pet. 4).
Ny batisan'ny Fanahy Masina dia ny fiainana ny fanavaozam-panahy izay anaovan' ny Fanahy Masina batisa ny olona iray. Ny hoe "batisan' ny Fanahy Masina" dia mampahatsiahy ny voalaza ao amin' ny Baiboly, araka ny ambaran' i Joany mpanao batisa sy i Jesoa ary ireo Apôstôly izay milaza fa ny fiainana izany fahatsapana izany dia fanavaozana avy amin' ny Fanahy Masina ka mampanakaiky bebe kokoa ilay olona miaina izany an' Andriamanitra. Ao amin' ny Filazantsaran'i Matio dia voasoratra fa nanao batisa tamin' ny rano i Joanay nefa nanambara io evanjely io fa ho avy ny fotoana izay hisian' ny batisan' ny Fanahy Masina, izay hotanterahin' ny olona lehibe noho izy. Ny Asan' ny Apôst$ply dia nanambara ny fahantomotr' izany batisa izany ho an' ireo Apôst$ply. Azon' izy ireo tokoa tamin' ny andro Pentekôsta izany batisan' ny Fanahy Masina izany, araka io boky io ihany. Noho io zava-nitranga io dia nidera an' Andriamanitra tamin' ny fiteny maro azon' ny Jentilisa ny Apôstôly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneomatôlôjia&oldid=1000048"
Voaova farany tamin'ny 7 Janoary 2021 amin'ny 15:35 ity pejy ity.